Otú a ga-esi na-achụ àjà dị iche iche (1-31)
Àjà ndị a ga na-achụ kwa ụbọchị (1-8)
Ndị a ga na-achụ n’Ụbọchị Izu Ike (9, 10)
Àjà ndị a ga na-achụ kwa ọnwa (11-15)
Ndị a ga na-achụ n’Ememme Ngabiga (16-25)
Ndị a ga na-achụ n’Ememme Izu (26-31)
28 Jehova gwaziri Mosis, sị: 2 “Nye ndị Izrel iwu, sị ha, ‘Hụnụ na unu na-ewetara m onyinye m, ya bụ, achịcha m. Unu ga na-achụ àjà m ndị a na-esu ọkụ n’oge ha a kara aka ka ha bụrụ àjà na-esi ísì ọma.’*+ 3 “Sịkwa ha, ‘Ihe a bụ àjà a na-esu ọkụ unu ga na-achụrụ Jehova: kwa ụbọchị, unu ga na-achụ ụmụ ebule abụọ ahụ́ dị mma, ndị gbara otu afọ otu afọ, ka ha bụrụ àjà a na-esu ọkụ mgbe niile.+ 4 Ị ga-achụ otu ebule n’àjà n’ụtụtụ, chụọkwa ebule nke ọzọ n’àjà ná mgbede.*+ 5 Ị ga-eji otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu efa* ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara otu ụzọ n’ụzọ anọ nke otu hin* mmanụ oliv, chụọ nke ọ bụla n’ime ha n’àjà ka ọ bụrụ àjà ọka.+ 6 Ọ bụ àjà a na-esu ọkụ mgbe niile,+ nke m kwuru n’Ugwu Saịnaị ka a na-achụ ka ọ bụrụ àjà na-esi ísì ọma,* àjà a na-esu ọkụ a na-achụrụ Jehova, 7 ya na àjà mmanya ya na ya na-agakọ, ya bụ, otu ụzọ n’ụzọ anọ nke otu hin maka otu nwa ebule.+ Wụpụrụ Jehova mmanya na-aba n’anya n’ebe nsọ ka ọ bụrụ àjà mmanya. 8 Ị ga-achụ nwa ebule nke ọzọ n’àjà ná mgbede.* Ị ga-eji àjà ọka na àjà mmanya ndị dị ka nke ụtụtụ chụọ ya. Ị ga-achụ ya n’àjà ka ọ bụrụ àjà a na-esu ọkụ, àjà na-esi ísì ọma* a na-achụrụ Jehova.+ 9 “‘Ma n’Ụbọchị Izu Ike,+ a ga-eji ụmụ ebule abụọ ahụ́ dị mma, ndị gbara otu afọ otu afọ, chụọ àjà, ha na ụzọ abụọ n’ụzọ iri nke otu efa ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, ka ọ bụrụ àjà ọka, ya na àjà mmanya ya na ya na-agakọ. 10 Ọ bụ ya bụ àjà a na-esu ọkụ a ga na-achụ n’Ụbọchị Izu Ike, ya na àjà a na-esu ọkụ nke a ga na-achụ mgbe niile nakwa àjà mmanya ya na ya na-agakọ.+ 11 “‘Ná mbido ọnwa ọ bụla,* unu ga-eji oké ehi abụọ, otu ebule, na ụmụ ebule asaa ahụ́ dị mma, ndị gbara otu afọ otu afọ, chụọrọ Jehova àjà a na-esu ọkụ,+ 12 nakwa ụzọ atọ n’ụzọ iri nke otu efa ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, ka ọ bụrụ àjà ọka+ maka oké ehi nke ọ bụla, nakwa ụzọ abụọ n’ụzọ iri nke otu efa ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, ka ọ bụrụ àjà ọka maka otu ebule ahụ,+ 13 nakwa otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu efa ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ, ka ọ bụrụ àjà ọka maka nwa ebule nke ọ bụla. Ọ bụ àjà na-esi ísì ọma*+ a na-esu ọkụ, àjà a na-esu ọkụ a na-achụrụ Jehova. 14 Àjà mmanya ha na ha ga-agakọ ga-abụ ọkara otu hin mmanya maka otu oké ehi+ na otu ụzọ n’ụzọ atọ nke otu hin maka ebule ahụ+ nakwa otu ụzọ n’ụzọ anọ nke otu hin maka otu nwa ebule.+ Ọ bụ ya bụ àjà a na-esu ọkụ a ga na-achụ kwa ọnwa n’afọ. 15 A ga na-achụkwara Jehova otu nwa ewu n’àjà ka ọ bụrụ àjà mmehie, ma e wepụ àjà a na-esu ọkụ a na-achụ mgbe niile na àjà mmanya ya na ya na-agakọ. 16 “‘N’abalị iri na anọ n’ọnwa mbụ, a ga-emere Jehova Ememme Ngabiga.+ 17 N’abalị iri na ise n’ọnwa ahụ, a ga-eme ememme. A ga-eri achịcha na-ekoghị eko ruo ụbọchị asaa.+ 18 N’ụbọchị nke mbụ, a ga-enwe mgbakọ dị nsọ. Unu arụla ọrụ ọ bụla siri ike. 19 Unu ga-eji oké ehi abụọ, otu ebule, na ụmụ ebule asaa ndị gbara otu afọ otu afọ chụọrọ Jehova àjà a na-esu ọkụ. Ọ bụ anụmanụ ndị ahụ́ dị mma ka unu ga-achụ n’àjà.+ 20 Unu ga-achụkọta ha na àjà ọka ha, ya bụ, ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ.+ Ụzọ atọ n’ụzọ iri nke otu efa ga-abụ maka otu oké ehi, ụzọ abụọ n’ụzọ iri abụrụ maka ebule ahụ. 21 Ị ga-achụ otu ụzọ n’ụzọ iri n’àjà maka nwa ebule nke ọ bụla n’ime ụmụ ebule asaa ahụ, 22 chụọkwa otu ewu ka ọ bụrụ àjà mmehie a ga-eji kpuchiere unu mmehie. 23 Unu ga-achụ ihe ndị a n’àjà, ha na àjà a na-esu ọkụ a na-achụ n’ụtụtụ, bụ́ àjà a na-esu ọkụ mgbe niile. 24 Unu ga-esi otú a na-achụ ihe ndị a n’àjà kwa ụbọchị ruo ụbọchị asaa ka ha bụrụ ihe oriri, ya bụ, àjà a na-esu ọkụ na-esi ísì ọma* nke a na-achụrụ Jehova. A ga-achụkọta ya na àjà a na-esu ọkụ mgbe niile na àjà mmanya ya na ya na-agakọ. 25 N’ụbọchị nke asaa, unu ga-enwe mgbakọ dị nsọ.+ Unu arụla ọrụ ọ bụla siri ike.+ 26 “‘N’ụbọchị ememme mkpụrụ mbụ kara aka,+ mgbe unu na-ewetara Jehova àjà ọka ọhụrụ,+ unu ga-enwe mgbakọ dị nsọ n’oge ememme izu unu.+ Unu arụla ọrụ ọ bụla siri ike.+ 27 Unu ga-eji oké ehi abụọ, otu ebule, na ụmụ ebule asaa ndị gbara otu afọ otu afọ chụọrọ Jehova àjà a na-esu ọkụ ka ọ bụrụ àjà na-esi ísì ọma,*+ 28 nakwa àjà ọka ha na ha na-agakọ, ya bụ, ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara mmanụ. Ụzọ atọ n’ụzọ iri ga-abụ maka oké ehi nke ọ bụla, ụzọ abụọ n’ụzọ iri abụrụ maka otu ebule ahụ, 29 otu ụzọ n’ụzọ iri abụrụ maka nwa ebule nke ọ bụla n’ime ụmụ ebule asaa ahụ. 30 Unu ga-achụkwa otu nwa ewu n’àjà ka ọ bụrụ àjà a ga-eji kpuchiere unu mmehie.+ 31 Unu ga-achụ ihe ndị a n’àjà, ha na àjà a na-esu ọkụ mgbe niile na àjà ọka na àjà mmanya ha na ha na-agakọ. Anụmanụ ndị ahụ ga-abụ ndị ahụ́ dị mma.+
^ Na Hibru, “ọnwa unu.”